प्लेन उडाउँदा उडाउँदै पाइलटको ड्यूटी सकिए पछि …………. « Bazar Dainik
प्लेन उडाउँदा उडाउँदै पाइलटको ड्यूटी सकिए पछि ………….
23 November, 2021 11:29 am
झापा, मंसिर ७ । आकाशमा प्लेन उडाउँदा उडाउँदै पाइलटको ड्यूटी सकियो । के अब पाइलटले जहाजलाई गन्तव्यमा नपुर्याउने ?
घटना सोमबारको हो । काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सको ट्वीनअटर विमान रुकुमको चौरजहारी विमानस्थल उड्दै थियो । अपरान्ह ३ बजेको समयमा जहाज काठमाडौँबाट छुट्ने समय तालिका थियो । जहाजमा ८ जना यात्रु थिए ।